kiratisaathi.com - एमालेमा पनि चिरा पर्दै - जनजाति र मधेसी नेताहरू, अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,पासाङ शेर्पा खल्त
Title: एमालेमा पनि चिरा पर्दै - जनजाति र मधेसी नेताहरू, अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,पासाङ शेर्पा खल्त
एमालेमा पनि चिरा पर्दै - जनजाति र मधेसी नेताहरू, अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,पासाङ शेर्पा खल्तीमा राजीनामा नै बोकेर हिँडिरहेका छन्
(काठमाडौ, जेष्ठ २० - एमालेमा अशोक राई पुराना नेता हुन् । तीन पटक मन्त्री पनि भइसकेका छन् । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले पार्टीका उपाध्यक्ष । एमालेकै राजनीतिमा वर्षौं बिताएका उनी यतिबेर पार्टीमा बस्ने/नबस्ने दोधारमा छन् । एमालेमै वर्षौं बिताएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मनोदशा पनि यस्तै छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका गुरुङ एक पटक मन्त्री भएका छन् । संविधानसभा चुनाव पार्टीको तर्फबाट जितेर पनि आए । एमालेबाट बाहिरिने कि बस्ने भन्ने अन्तिम छिनोफानो गर्ने तयारीमा छन् । संविधानसभाको विघटनपछि राई र गुरुङकै जस्तै अवस्थामा केही नेताहरू खल्तीमा राजीनामा नै बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
निवर्तमान सभासद पासाङ शेर्पाले पार्टी छाडिसके । वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बाले पार्टीमा रहन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । केही जनजाति र मधेसी नेताहरूबाट जुनसुकै बेला खल्तीको राजीनामा पार्टी नेतृत्वको हातमा पुग्न सक्छ । जेठ ९ पछि स्थायी समितिका बैठकमा उपाध्यक्ष राई गएका छैनन् । शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठकमा राई, गुरुङ, रामचन्द्र झालगायत नेता सहभागी भएनन् । पूर्वसांसदहरूको शुक्रबारको भेलामा पनि धेरैजसो जनजाति नेता उपस्थित भएनन् ।
किन यो अवस्था आयो त ? असन्तुष्ट नेताहरूको जावाफ छ- 'पार्टीले पिछडिएको र उत्पीडित समुदायको कुरा सुन्न सकेन ।' उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा संविधानसभाभित्र पार्टीका शीर्ष नेताहरू जनजाति र मधेसीका मुद्दामा बढी नै संकीर्ण भइदिए । त्यसकै कारण संविधानसभा विघटन भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
'पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान ल्याउने कुरामा पार्टी सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत भएन, संविधानसभा विघटनमा पनि एमालेको हात रह्यो,' पोलिटब्युरो सदस्य झाले भने, 'त्यसपछि हाम्रो विश्वास टुटेको छ, टुटेको विश्वासलाई बोकेर कति बेलासम्म बस्ने ?'
संविधानसभाकै समिति र राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पक्षमा संविधानसभाभित्र ४ सय १ (दुई तिहाइ) पुग्ने अवस्थ्ाामा पनि पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा संविधानसभा विघटन भएको उनको आरोप छ ।
तर उनीहरूको यो आरोपलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरू मान्न तयार छैनन् । बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले संघीयताको मुद्दामा लचिलो र संविधान ल्याउने पहल गर्दा गर्दै माओवादीका कारण संविधानसभा विघटन गरेको बताए ।
संघीयताको मुद्दामा सबैलाई स्वीकार्य हुने ढंगले अघि बढ्न खोजेको तर अरूकै कारण संविधान नआएको उनले बताएका थिए । यो तर्कलाई जनजाति नेताहरूले स्वीकारेका छैनन् ।
'एकल पहिचानसहित मिश्रति नामकरण गरेर जान अरू सहमत हुने स्थितिमा पनि एमालेबाट असहमति भयो,' पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, 'पार्टी उत्पीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कहिल्यै तयार देखिएन, प्रगतिशील पार्टीको शैली पश्चगामी जस्तो भयो त्यसैमा हाम्रो असहमति छ ।'
एमालेभित्रको असन्तुष्टि र विवादको प्रमुख विषय संघीयता नै हो । पार्टीभित्र शीर्षसहित बहुमत नेताहरू बहुपहिचानका राज्यहरू स्थापना गर्ने पक्षमा उभिए । तर केही जनजाति नेता भने एकल जातीय पहिचानकै राज्य बनाउनुपर्ने अडानमा रहे । पार्टीभित्रको बहुमतका कारण एकल पहिचानमा जाने मत झिनो भयो । त्यसैले संविधानसभाभित्र एमालेले अन्तिम समयसम्म पनि बहुपहिचानकै पक्षमा वकालत गर्‍यो ।
उपाध्यक्ष राईले जेठ ९ को स्थायी समिति बैठकमा संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियामा गएर भए पनि विवाद समाधान गर्नुपर्ने लिखित धारणा राखेका थिए । सहमति नभएको अवस्थामा मतदानमा जाने प्रक्रिया रोक्न नहुने, रोकियो भने संविधानसभा नै विघटन हुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा आफू पार्टीमा नरहन सक्ने पत्र अध्यक्षलाई दिएका थिए । एकल जातीय पहिचानको पक्षमा ४ सय १ मत पुग्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न नहुने धारणा उनको थियो । तर स्थायी समितिका अन्य सदस्यले नमानेपछि जनजातिहरू चिढिए । त्यही दिन एमाले अनुशासन आयोगले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एकल जातीय पहिचानको पक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाउने नेताहरूलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन निर्देशन दियो । यसले उनीहरूलाई असन्तुष्ट बनायो ।
जनजाति नेताहरूले गरिरहेको तर्कलाई अन्य धेरै नेताहरू अस्वीकार गर्छन् । पार्टीभित्र बहस नै नगरी बाहिर-बाहिरबाट असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्नु गलत भएको उनीहरूको बुझाइ छ । 'कतिपय विषयमा बहस र छलफल नै नभई मुख्य बाधक एमाले नै हो भन्नुचाहिँ गलत हुन्छ,' पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'गुनासाहरूलाई पार्टीभित्रैबाट हल गर्न सकिन्छ ।'
कतिपयले पार्टीका सिद्घान्तबाट विचलित भएर हिँडन खोजेको भन्दै ओलाचना गरेका छन् । 'कम्युनिस्ट सिद्घान्त बोकेर हिँड्नेले जातीय कुरा गर्नु विचलन हो,' केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भने, 'चित्त नबुझेको कुरा त पार्टीभित्र छलफल गर्ने हो अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै हिँड्ने त होइनन् नि ।'
एमालेले सुरुदेखि नै संघीयताको सम्बन्धमा स्पष्ट धारण तय नगर्दा असन्तुष्टि चुलिएको हो । संविधानसभाको समितिमा जातीय पहिचानसमेत उल्लेख गरी १५ प्रदेशको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही अवधारणाले धेरै जनजाति र मधेसी नेताहरूले स्वीकारेका थिए र आफ्नो समुदायमा पनि त्यो कुरा गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा पुस अन्तिम साता भक्तपुरको बोडेमा संघीयतासम्बन्धी दुई दिने बृहत् भेला भयो । भेलामा पार्टीका धेरै नेताहरूले जातीय पहिचानमा जाँदा घातक हुने धारणा राखे । 'बोडेको बैठकमा पहिचानको विषयमा बहस हुँदा जातको राज्यमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा भयो, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकलाई पनि उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन,' केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'पार्टीमा छलफलै नगरी बाहिर आफ्नै ढंगले हिँड्नु भयो ।' उनले पार्टीभित्र अझै पनि लचकताका साथ छलफल गरेर कुनै समुदायलाई मर्का परेको छ भने उचित स्थान दिने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
यो मुद्दामा पार्टी नेतृत्व र जनजाति नेताहरूबीच 'ग्याप' भएको नेता ज्ञवाली बताउँछन् । 'विगतमा पार्टीले स्पष्ट निर्णय नगर्दा अन्योल भयो, १५ प्रदेशसम्मको कुरा पनि कुनै बेला आएको थियो,' उनले भने, 'पछि त्यो कुरा ठीक होइन भन्नेमा स्थायी समिति निष्कर्षमा पुग्यो, यसले समस्या पैदा भयो ।'
मिलाउन दौडधुप पछिल्लो विवादलाई मिलाउन एमालेभित्र दौडधुप पनि चलिरहेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूलाई मनाउन शीर्ष नेताहरू दिनहुँ छलफल गरिरहेका छन् । शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि नेताहरूले पार्टीभित्रका विवाद मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा अघि बढ्नका लागि आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्ने भन्दै विवाद मिलाउन जोड दिएका थिए । 'पार्टीभित्र विवाद मिलाएर जानुपर्नेमा सबैको जोड छ,' बैठकपछि प्रचार प्रमुख ज्ञवालीले भने, 'सबैका कुरालाई सम्बोधन हुने दिशामा पहल भइरहेको छ ।' असन्तुष्ट नेताहरू नेतृत्वले गल्ती सच्याएर अघि बढे पार्टीबाट बाहिरिने विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने बताइरहेछन् । 'नेतृत्वले गल्ती स्वीकारेन र बस्ने अवस्था भएन भने राजीनामा दिएर जान्छांै,' एक नेताले भने, 'तर पार्टी फुटाउनेचाहिँ होइन ।' ती नेताले भरसक गल्ती महसुस गराएर मिलेर जान तयार रहेको बताए ।
यसैबीच पोलिटब्युरो बैठकमा असारमा बृहत् कार्यकर्ता भेला गर्ने र राष्ट्रियसहितको सरकार निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्नेलगायत विषय समेटिएको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
subir's blog responses to ( एमालेमा पनि चिरा पर्दै - जनजाति र मधेसी नेताहरू, अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,पासाङ शेर्पा खल्त )